38 Guurada Aasaaskii Ururkii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Somaaliyeed (SNM)Qaybtii 1aad. | WAJAALE NEWS
38 Guurada Aasaaskii Ururkii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Somaaliyeed (SNM)Qaybtii 1aad.
Marxalado iyo xaalado kala duwan ayaa SNM halgankeedu soo maray min abaabulkii hore ee ballaysinka ahaa, ku dhawaaqii rasmiga ahaa, u banbixii goobaha naf-hurka iyo bilowgii dagaalka hubaysan, dhammaystirkii hawlaha dib u xoraynta, illaa wareejintii talada iyo dhalashadii Somaliland.
Taariikhdaasi si dhab ah oo garashaysan oo ka baxsan soohdimaha caaddifadda iyo qiirada ama jibbada iyo qof ama qolo jeclaysiga ogaalkayga loo ma qiimayn, si mug leh na waxba loogama qorin marka laga reebo in kooban oo hal-karaanle ah.
Qormooyin dhawr ah oo ay tani ugu horrayso ayaa aan ku soo bandhigi doonaa inta aan ka ogahay oo run ah SNM waayaheedii iyo mabaadideedii siyaasadeed.
Abaabulkii Hore ee SNM
Muqdisho ayaa la tilmaamaa abaabulkii hore ee SNM in uu ka bilaabmay nuskii dambe ee tobanlihii 1970-aadkii. Madaxdii sare ee xukuumaddii Soomaaliya rag ka mid ah oo kaashanaya qaar ka mid ah saraakiishii ciidamada qalabka sida iyo amniga iyo waxgarad kale ayaa ku dhaqaaqay abaabul qarsoodi ahaa oo dareenkiisu daarranaa in laga horyimaaddo oo lagu kaco siyaasaddii ka sii daraysey ee xukuumadda. Madaxdaas iyo kooxaha ay abaabulkaas la wadeen waxa ay ka soo jeedeen Gobolladii Waqooyi.
Ismaaciil Cali Abokor iyo Cumar Carte Qaalib ayaa madaxda sare ka mid ahaa hormoodkooda. Dhanka saraakiisha waxa foolaad u ahaa Maxamed Xaashi Diiriye (Lixle) iyo Axmed Maxamed Halac labadooda ba AHN.
Kelitalisnimadii waddanka ka jirtey cabsi iyo baqdin la xidhiidha, iyo kalsooni-darradii iyo kala shakigii dadka lagu dhex beeray ayaa keenaysay in si qarsoodi ah wax lagu wado, hab-raac qabali ahna la isugu xidhmo oo loo wada xidhiidho, waayo talisku isagaa inta uu qabyaaladdii dadka ku yidhi “ha la aaso”, haddana iilka iyo luxudkii la jiifiyey dadkii u daba maray oo ka soo qufay oo dibedda ula soo baxay, madaxtooyadiisana la yimi oo ku rabbaystay iyada oo miciyo libaax yeelatay.
Labadaas qolo ee gudaha iyo dibedda abaabulkaas kaga foognaa waxa la tibaaxaa in ay is ogaayeen, haddana aanay lahayn himilo guud mooyaane hadafyo hoose oo ku salaysan sida wax loo yagleelayo iyo sida himilada iyo higsiyada gaadhitaankooda la isku waafajinayo.
Waxa kale oo jirtey in labada qolo hawluhu u kala fududaayeen. Qolyaha guduhu waxa ay ku jireen af libaax oo waa ay ka halis badnaayeen dhiggoodii kale ee Sucuudiga hawsha ka wadey oo haystay xorriyad ta qolyaha gudaha ka roon iyo u madaxbannaan hawsha ay qabanayeen abaabulkeeda.
Ku Dhawaaqii SNM iyo Natiijadii Bilowgii Ka Dhalatay
Si kasta ba ha ahaato’e qolyihii dibedda ayaa magacii yeeshay oo London kaga dhawaaqay SNM 6-dii April 1981 oo hadda laga 38 sannadood. Suurta gal ma ahayn in Sacuudiga urur dabeecaddaas leh laga dhisaa ama lagaga dhawaaqaa. Sidaas darteed ayay kooxdaasi inta ay dhigeen wixii ay gacanta ku hayeen ugu hulleeleen waddanka Boqortooyada Ingriiska, iyaga iyo koox kale oo halkaas sii joogteyna sannadkaas SNM ugaga dhawaaqeen.
Qolyaha Sucuudigu waxa ay soo direen rag ay ka mid ahaayeen Sh. Yuusuf Sh. Cali Sh. Madar, Axmed Ismaaciil Cabdi (Duqsi) iyo Xasan Aadan Wadaad-diid saddexda ba AHN oo noqday horseedkii halganka hubaysan, waxa weheliyey ragga ay ka mid ahaayeen Prof Cabdisalaan Yaasiin Maxamed, Maxamed Xaashi Cilmi, Axmed Maxamed Jaamac Dable iyo Axmed Maxmed (Seyidi). London waxa kaga biiray qolyahaas Sacuudiga ka yimi rag ay ka mid ahaayeen Axmed Jimcaale (AHN), Xasan Ciise Jaamac, Cali Cabdilqaadir, Axmed Saylici iyo Siciid Cabdillaahi Cigaal oo xilli dambe taliskii Maxamed Siyaad dib ugu laabtay.
Ku dhawaaqaas SNM wax weyn ayuu ka beddelay siyaasaddii dalka, waxaana abuurmay xiisad iyo jawi tuhunno siyaasadeed iyo qaar qabali ah huwanaa oo kala gurasho iyo xeelado dahsoonba lahaa. Waxa kordhay oo baallaha fidsaday cadaadiskii maamulayaasha talisku dadka ku hayeen. Waxa Hargeysa lagu xidhxidhay dhallinyaradii UFFO, waxa qarxay gadoodkii ardayda 20-kii Feb 1082.
1-dii May 1982 waxa magaalada Burco ka dhacay muddaharaadyo ka dabqaadanayey kuwaas Hargeysa ka qarxaday. Muddo ka dibna waxa la xidhxidhay xubno ka mid ah dawladdii MS Barre, ayna ka mid ahaayeen Ismaciil Cali Abokor, Cumar Carte Qaalib, Maxamed Sh. Aadan iyo dad kale oo badan oo isugu jira saraakiil ciidammo iyo sibilba leh, iyo waxgarad kala duwan oo ka soo jeeda gobolladii Waqooyi.
Tuulada Dharkayn-geeye ee degmada Buuhoodle waxa maxkamad milateri badhka taagtay oo si foolxun loogu toogtay Col. Cabdillaahi X. Siciid Cabdi (AHN) oo ka mid ahaa saraakiishii ugu qiimaha badnayd XDS, taas oo dareen weyn ku dhalisay oo dhiillo gelisey saraakiil badan oo ka soo jeeddey gobolladii Waqooyi.
Saraakiishii ugu horraysay ayaa ka gudubtey xuduudda oo u tallowday dhanka Itoobiya. Maxamed Cali Faarax (AHN) iyo Jabhaddii Afraad ayaa ka xidhiidh furtay ciidamadii Soomaaliya. Aadan Sh. Maxamed (Aadan Shiine), AHN, Axmed Dhagax (AHN) iyo Maxamed Kaahin Axmed, ayaa ka goostay saraakiishii ciidamada. Dawladdii Itoobiya ayaa saraakiishaas u soo jeedisey in ay ku biiraan SSDF oo saldhigyadeeda ciidameed daadsanaayeen soohdinta u dhaxaysa labada waddan min Goraya-cawl oo galbeedka Hargeysa ku qumman ilaa koonfurta shishe ee Soomaaliya.
Saraakiishaasi waxa ay diidmo ku qaaddeceen codsigii Itoobiyaanka, waxanay u sheegeen in ay ka mid yihiin Ururka SNM oo markaas fadhigiisu ahaa London o. Halkaas waxa ka bilaabmay digorogashadii maamulka ee SNM uu Itoobiya ugu soo guurey. Markii ay SNM hoggaankeedu Addis Ababa ka soo degey, waxa dawladdii Mingiste Hailu Mariam oo tixgelinaysa culays kaga imanayey dibedda, gaar ahaan, Yemen iyo Liibiya ay hordhigtay hoggaankii cusbaa ee SNM hindise uu qorshihiisu ahaa in ay la midoobaan SSDF oo ahayd jabhad halgankeedu tisqaadsanaa, saldhiggeeduna Itoobiya ahaa.
Itoobiya iyo Imashadii Hoggaankii SNM
Caqabaddii ugu waynayd ee ugu horraysay ee ay Itoobiya tegitaankeeda kala kulmaan kooxda SNM ayaa ahayd culayskaas siyaasadeed ee ku yimi oo ahaa in ay ku biiraan oo xoojiyaan jabhaddaas Soomaaliyeed ee kaga horraysay ee fadhiisimada Itoobiya ku lahayd.
SSDF waxa ay lahayd cudud ciidan oo xoog leh oo ka garab dagaallama ciidamadii Mingiste iyo awood dhaqaale oo kaga furrayd tuunbooyinkii xoorka badnaa ee Qaddaafiga Libya ee dhowaan halligmay.
QALINKII; MAXAMED BAASHE XAAJI XASAN.